Tu Tu Tha: အစ်မသန်းမြင့်အောင်မဟုတ်တဲ့ အစ်ကိုသန်းမြင့်အောင် ဆုံးပြီ
အစ်မသန်းမြင့်အောင်မဟုတ်တဲ့ အစ်ကိုသန်းမြင့်အောင် ဆုံးပြီ
ကိုသန်းမြင့်အောင် ဆုံးပြီ ဆိုသည့်သတင်း ကြားလိုက်ရတော့ ရုတ်တရက် အံ့သြသွားမိသည်။ လူပုံဝဝ၊ မျက်နှာ ချိုချိုနှင့် ခပ်ရိုးရိုးပုံစံ သူ့ကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်လာသည်။ စာနယ်ဇင်းသမားနှင့် သရုပ်ဖော်ပုံရေးသူ၊ ပန်းချီကား ရေးသည့် ပန်းချီဆရာဆိုတာကတော့ ဆက်စပ်နေမြဲ။ ကျမ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ အသက်လည်း သိပ် မကြီးသေး၊ ဘီယာ၊ အရက်၊ ဆေးလိပ်လည်း မသောက်သူ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်။ ကိုစိုးဝင်းငြိမ်းကတော့ သူ့မှာ ငှက်ဖျားအခံရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနုပညာရှင် တယောက်အနေနှင့် ငယ်လွန်း သေးသည်။ သူ့မှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေဦးမှာ ကျမ ယုံသည်။
နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပန်းချီဆရာ၊ ကာတွန်းဆရာတွေ ပြပွဲတွေ လုပ်ကြတော့ ကိုသန်းမြင့်အောင်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်သူများထဲတွင်ပါဝင်ပြီး ပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့သည်။ မကြာခင်မှာလည်း ပွဲတပွဲ လုပ်ဖို့ စီစဉ်နေသည်ဟု သိရသည်။
သရုပ်မှန်ပန်းချီဆရာတယောက် ကြွေလွင့်ပြန်ပြီပေါ့။ ဒီမနက် ၁၀ နာရီ ရေဝေးမှာ စည်ကားခဲ့လိမ့်မည်။ မစည်ကားအပ်သော အရပ်မှာ စည်ကားသည်ကို ဝမ်းနည်းသည်။
ကိုသန်းမြင့်အောင်ကို အစ်မသန်းမြင့်အောင်၏ စာအုပ်အဖုံးများမှစတင် ရင်းနှီးခွင့်ရသည်။ အဲဒီတုန်းက ရယ်မိ သေးသည်။ သန်းမြင့်အောင် ၂ ယောက် ... ဆုံလည်း ဆုံဆည်းတတ်ပါပေ့ ...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဝင်စား စရာတော့ ကောင်းသည်။
လူခြင်း ခင်မင်သည်ကတော့ ဘယ်အချိန်က စလည်း မမှတ်မိတော့ပါ။ သို့သော် သူနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးခင်မင် နုတ်ဆက်မိနေတာတော့ သိသည်။ ကျမ မောင် သူငယ်ချင်း ပန်းချီဆရာများမှ တဆင့်လား၊ ဖြစ်နိုင်တာတော့ ကာတွန်းဝလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ပဲဖြစ်မည်။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် တူတူထိုင်ဖူးကြသည်။ ပန်းချီခန်းများတွင် ဆုံဖူးသည်၊ ပြပွဲများတွင် တွေ့ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးသူနှင့်တွေ့သည့် အချိန်ကတော့ မှတ်မှတ်ရရ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ကာလ ... ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလထဲတွင် ဖြစ်သည်။ မိုးရွာနေသည့် တနေ့တွင် ကျမတို့ ရုံးအောက်နားက လက်ဘက်ရည် ဆိုင် တဆိုင်မှာ ထိုင်နေတုန်း သူနှင့် ကျမ အစ်မကဲ့သို့ခင်မင်ရသည့် စာရေးဆရာမတဦးတို့ ရောက်လာသည်။ သူတို့က သံဃာများ နောက်လိုက်ကြဖို့ ... မသွားခင် လက်ဘက်ရည် ဝင်သောက်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျမတို့လည်း သွားဖို့ တိုင်ပင်ထားပြီးသား ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဲဒီနေ့က မသွားဖြစ်ခဲ့။ ကိုသန်းမြင့်အောင် တို့နှင့် စကားကောင်းနေခဲ့သည်။
“အက်ဆေး စာအုပ်တအုပ် လုပ်ဖို့ တိုင်ပင်နေကြတာ။ အဲဒါ တူးတူးသာရဲ့ ... ဟန်သစ်ထဲမှာ ပါခဲ့ဖူးတဲ့ ... တိမ် ဆိုတဲ့ အက်ဆေးလေး သုံးချင်တယ် ရမလား” ဟု ကိုသန်းမြင့်အောင်က ကျမကို ပြောသည်။
ကျမလည်း ပျော်သွားခဲ့သည်။ ဒီအက်ဆေးလေးက ကျမရဲ့ ရှားရှားပါးပါး အက်ဆေး တပုဒ်၊ ၂ ပုဒ်ထဲက ပထမဆုံး ရေးဖြစ်ပြီး ဖော်ပြခံရသည့် အက်ဆေးလေးဖြစ်သောကြောင့် ကျမ သံယောဇဉ်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ကျမရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း ကော်ပီမရှိတော့။ အဲဒီစာအုပ် ဘယ်ရောက်နေမှန်းလည်း မသိတော့ ...။
“သုံးလို့ရပါတယ် အစ်ကို ... ဒါပေမယ့် ကိုစန်းဦးဆီ ပြန်သွားရှာရမယ် ထင်တယ်” ဟု ကျမ သူ့ကို ပြောဖြစ်သည်။ သူက သွားရှာလိုက်မည်ဟု ဆိုသည်။ အဲဒီနောက်တော့ ကျမတို့ စာပေအကြောင်း၊ ပန်းချီအကြောင်း၊ လက်တလော ဖြစ်နေသည့် သံဃာအရေးအခင်းအကြောင်းကို လက်ဘက်ရည်နှင့် မြည်းကြသည်။ မိုးစဲ သွားတော့ သူတို့ ထထွက်သွားသည်။ ကျမတို့က အလုပ်မပြတ်သေးသောကြောင့် ရုံးပေါ်ပြန် တက်ကြသည်။
အဲဒါ သူနှင့် နောက်ဆုံး ဆုံဖြစ်ခြင်းသာ ...။
နောက်တော့ ကျမ ပြည်ပ ထွက်လာခဲ့သည်။ ကျမ အက်ဆေးလေး ကိစ္စလည်း မသိတော့။ ကိုသန်းမြင့်အောင် အကြောင်းကတော့ စာရေးဆရာ ... ပန်းချီဆရာ ကာတွန်းဆရာ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများက တဆင့် ပြောဖြစ်သည်။
မကြာသေးခင်ကမှ ပြည်တွင်းစာနယ်ဇင်းလောကက မိတ်ဆွေတယောက်နှင့်ဆုံတော့ ပြောဖြစ်သေးသည်။ သူက “ကိုသန်းမြင့်အောင် ပန်းချီကားတွေ တော်တော်ရောင်းနေရသည်” ဟု ဆိုတော့ ဝမ်းသာမိသေးသည်။ ခုတော့ သူ ဆုံးပြီတဲ့။
ကာတွန်းဝလုံးက အွန်လိုင်းကနေ “မြန်လိုက်တာ အစ်မရယ်” ဟုဆိုသည်။ ကိုသန်းမြင့်အောင်ကို အစ်မ သန်းမြင့်အောင်လောက် လူသိမများပေမယ့် ... အနုပညာလောကတခုလုံးကတော့ ကောင်းကောင်း သိကြသည်။ သူလည်း အစ်မသန်းမြင့်အောင်လို လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် စေတနာထက်သန်သူ ဖြစ်သည်။
“ငါနဲ့ မင်းထက်မောင်တောင် သူ့ကို သွားဒီညနေ သွားကြည့်မယ် ပြောနေတာ။ ပြောလို့ မဆုံးသေးဘူး သေပြီ ဆိုတဲ့သတင်း ကြားတာပဲ” ဟု ကိုစိုးဝင်းငြိမ်းက ကျမကို ပြောပြသည်။ သူတို့အတူတူ လုပ်စရာ အလုပ်တွေ အများကြီး ရှိနေကြ ဦးမှာ သေချာသည်။
ကျမကတော့ လွယ်အိတ်အနီကျားကြီးလွယ်ထားသည့် လူပုံဝဝ မျက်နှာချိုချု သူ့ပုံစံကိုသာ မြင်ယောင် နေမိသည်။ ဟိုလူတွေ ပြောသည့် ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံ ဆိုတာ ပျော်စရာ လုံးဝ မကောင်းမှန်း သူ ရိပ်မိသွားသည် ထင်၏။ စောစီးစွာ သူ ထွက်သွားခဲ့ပြီ။ ဒါမှမဟုတ် ... သူ့လို စောစောထွက်သွားကြသည့် အနုပညာသမားများ၏ ဆုံရပ်တခုကို သူ ... သိများ သိလေသည်လား ....။ ဒါမှ မဟုတ်လည်း ... လူ သေပေမယ့် နာမည် မသေဘူး ဆိုတာကို ... သက်သေ ပြချင်လို့များလား ....။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမတို့အတွက် အနုပညာအစ်ကို တဦး ဆုံးရှုံးရ ပြန်လေပြီ ...။ ။
Wednesday, May 12, 2010 | Labels: ကြွေလွင့်သူ |
This entry was posted on Wednesday, May 12, 2010 and is filed under ကြွေလွင့်သူ . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
အစ်မသန်းမြင့်အောင်မဟုတ်တဲ့ အစ်ကိုသန်းမြင့်အောင် ဆံ...